Xasan Xanafi Xaaji Oo Maxkamada Ciidamada Maanta La Horgeynaayo - iftineducation.com
iftineducation.com – Maxkamada Ciidamada Qalabka sida Darajaeeda, koowaad ayaa maanta oo Khamiis ah waxaa la filayaa in la horgeeyo Xasan Xanafi Xaaji oo Shabaabka u qaabilsanaa Dabinada lagu dilo Suxufiyiinta.
Tan iyo markii Xasan Xanafi gacanta lagu dhigay Dabayaaqadii sanadkii 2014, markii ugu horeysay ayaa maanta la horgeynaya Maxkamada ciidamada Qalabka sida si loogu qaado xukun la xiriira dambiyada loo haysto.
Xeer ilaaliyaasha ku soo oogay Dacwada Xasan Xanafi ayaa ku sugan Xarunta Maxkamada, waxaana la dhageysan doonaa eedeymaha kala duwan ee loo haysto Xasan Xanafi, iyadoo intaasi kadibna maxkamada la sugaayo inay gaarto go’aan la xiriira kiiska Xasan Xanafi.
Xasan Xanafi ayaa Barnaamij ka baxay Tv-ga Dowladda wuxuu horay ugu qirtay inuu ka dambeeyay dilalka loo geystay Suxufiyiin Bulshada magac ku dhex lahaa, kuwaasi oo uu malegay dilalkooda.
Suxufiyiinta uu maleegay dilalkooda Xasan Xanafi oo aad u fara badan, ayaa ka howlgalaayay Warbaahino kala duwan oo ku yaallo Magaalada Muqdisho.
Suxufiyiinta reer Muqdisho ayaa soo dhaweeyay, tallaabada maanta Cadaalada lagu horgeynaayo eedeysane Xasan Xanafi Xaaji.